बल्ल आउने भयो ‘फ्रान्सेलीले देखेको नेपाल’ :: NepalPlus
वर्ष दिन नै पो हुन लाग्यो क्यारे- मैले लौ मेरो पुस्तक निस्कने भयो भनेको । लेखेर सकेकोपनि डेढ वर्षनै हुन लाग्यो । तैपनि अहिलेसम्म लाग्यो । त्यसको एउटा कारण थियो सम्पादन । अर्को कारण आफू देश बाहिर हुनु । बिदेशमा रहेर नेपालबाट काम लिँदा हरेक कुरामा ढिलाई हुने रहेछ । अब भने यि सबै खुड्किला पार गरेर पुस्तक बजारमा आउने भएको छ ।
पुस्तक लेखेर मात्रै हुँदैन । छाप्ने कसले ? मेहनत गरेर लेख्यो, गतिलो प्रकाशक पाउन मुस्किल । एक त रोयल्टि दिने प्रकाशन ग्रिहनै कम छन् । दिएपनि तिनले थोरै स्थापित र अझ पाका लेखकलाई मात्रै दिन्छन् । त्योपनि किताब छापेको छाप्यै गरेर बिक्रि भएको छैन भन्दै लेखकलाई ठग्छन् । त्यसैले गतिलै किताब लेखेपनि नेपालमा नाम कमाउनु त हो तर त्यसबाट लेखकलाई केहि आउन्न । अझ कतिपय त यस्ता प्रकाशक छन् तिनले राजधानी कटाएर बितरण गर्दैनन् । अनि दुख गरेर लेख्यो आम पाठककहाँ पुग्दैन । खुशिको कुरो के भने ‘ढिलै होस्, राम्रो होस’ भनेझैं मेरो पुस्तकले संभवत नेपालकै नीजि क्षेत्रको उत्क्रिष्ठ प्रकाशकलाई तान्यो । जगदम्बा प्रकाशन । वैशाखको पहिलो साता पुस्तक बिमोचन गर्ने अनौपचारिक सल्लाह भएको छ ।
मैले पुस्तकको मुख्य प्रिष्ठ (कभर पेज) एकसरो हेरें । मन पर्‍यो । अन्तिम भैसकेको छैन । नामपनि निर्क्यौल भएको छैन । आफ्नो सुझावसहित त्यसको जिम्मा मैले जगदम्बा प्रकाशनलाई नै दिएको छु । मेरो सुझाव अनुसार नेपाल : फ्रान्सेली आँखामा, नेपाल : फ्रान्सेली अनुभवमा वा फ्रान्सेलीले देखेको नेपाल ।
आफैले संस्था खडा गरेर त्यसलाई प्रकाशक बनाउनु, आफ्नै पैसा हालेर किताब छाप्नु, आफन्त कसैको नाममा संस्था वा गुठि खोलेर उसको नामबाट किताब निकाल्नु । यसरि निकालेका पुस्तकलाई म पुस्तक भन्दापनि लेखक बन्ने सस्तो आकांक्षा ठान्छु । जबर्जस्ति लेखक बन्ने चाहना । गतिलो रचना गरिन्छ भने अरुले मूल्यांकन गरेर म छाप्छु, तपाइको क्रिती गतिलो छ भन्नुपर्छ । आफैंले छाप्ने हो भने त जे जस्तो लेखेर छापेपनि भयो नी ! यस्तो लाग्छ मलाई । त्यसैले, प्रकाशकको खोजिमा लाग्दा अन्तत: जगदम्बासित करारनामा गरें मैले ।
जगदम्बा प्रकाशनले हामी जस्ता युवाहरुको निक्कै कम मात्रै निकालेको रहेछ पुस्तक । वीपी कोइराला, गणेशराज शर्मा जस्ता नाम चलेका ब्यक्तिका पुस्तक प्रकाशन गर्ने रहेछन् । पछिल्लो समयमापनि मेरो पुस्तक अगाडि स्व गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निकाल्दै रहेछन् । यस्तो स्थापित प्रकाशक पाउनु मेरोलागि ठूलै उपलब्धि हो । र अहिले लागिरहेछ- पुस्तकको विषयवस्तु छनौट र लेखनमा राम्रै मेहनत गरेछु क्यारे । तरपनि अन्तिम निर्णय त पाठकले गर्ने हो मेरो किताब कस्तो छ भनेर । तरपनि यो पुस्तकको यात्राले मलाई अर्को पुस्तक लेख्नकालागि थप हौस्याएको छ ।
जगदम्बाको अर्को राम्रो पक्ष साझा प्रकाशनसित समझदारी रहेछ । त्यसैले सायद साझा प्रकाशनका देशभर छरिएका हरेक कक्षबाट मेरो पुस्तकपनि बिक्रि हुनेछ । यो पक्कै आम पाठककहाँ पुग्ने छ । जगदम्बाको छपाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानिन्छ । रोयल्टीका मामिलामा पनि निकै राम्रो छ – पुस्तक प्रकाशित नहुँदै ४०० प्रतिको रोयल्टि अग्रिम दिने । संस्करण बढ्दै जाँदा रोयल्टिको प्रतिशतपनि बढ्ने रहेछ । साजसज्जा, प्रचारप्रसार, बिमोचन र दर्ता केहि कुरामा टाउको दुखाउनै नपर्ने । हरेक कुरामा सुझाव लिएर लेखकप्रति सम्मानपनि उत्तिकै ब्यक्त गर्ने रहेछन् ।
यसमा नेपाल देखे जानेका, अध्ययन र अनुसन्धान गरेका, फ्रान्सको भन्दा नेपालको अनुभव बढि भएका २९ जना विशिष्ट फ्रान्सेलीको अनुभव र अनुभूति छन् । २९ पात्रले नेपालको दर्जनौं विषयका बारेमा उप्काएका छन् । राजा विरेन्द्रका फ्रान्सेली मास्टर, उनैका हेलिकोप्टर चालक, एरिक भाली, नेपालमा करिब ३०० प्रजातिका फूल पत्ता लगाउने जँ फँस्वा दोब्रेमे, नेपालका बारेमा उपन्यास लेख्ने सिल्भियन, नेपालमा पहिलो गाडी भरियाका ढाडमा बोकाएर लैजाने राजदूत फँसिस द नोइयल, यातायात नभएर काठमाडौंदेखि धनकुटा र अर्घाखाँचीसम्म पैदल हिँड्ने मिरेइ एल्फर, फ्रान्सेली लेखक, वैज्ञानिक पेरिए, न्रित्यकार, प्रथम फ्रान्सेली सगरमाथा आरोही तथा पूर्व मन्त्री पियर माजो, राजा विरेन्द्र र महेन्द्रकि असल मित्र आलन ल ब्रेकलगायतका व्यक्तिको अनुभव र अनुभूति छ ।
नेपाल सरकारले सगरमाथाको टुप्पोमा हेलिकोप्टर टेकाएकै होइन भनेर प्रतिवाद गरिरहेका बेला सप्रमाण फ्रान्सेली हेलिकोप्टर चालक डिडिए देल्सालका अनुभव । नेपालका प्रथम अन्नपूर्ण आरोही मोरिस हेर्जोकलगायत केही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्वपनि समेटिएका छन् । फेस टु फेस लिइएका अन्तर्वार्ताका आधारमा आफैँले प्रत्यक्ष खिचेका जीवन्त तस्विर हुने छन् । साथै ती पात्रले नेपालमा खिचेका केही दुर्लभ तस्विरपनि ।
अन्तर्वार्ताका क्रममा लिइएका भ्वाइस रेकर्ड, भिडियो र तस्विर सबै आफूलाइ केही भएपनि अरूले सोध खोज गर्न पाउन् भनेर मदन पुरस्कार पुस्तकालयलाई संरक्षण गर्न दिने बचन लिखितम गरेर दिएको छु । पुस्तकका लागि असल प्रकाशकको खोजी गर्दा अक्किल सुझाइदिनु हुने अग्रज पत्रकार, लेखक र भिडियोमेकर दाई मोहन मैनाली प्रति क्रितज्ञ छु । यो हप्ता देखि दुई पटक म पुस्तकका केहि भाग नेपालप्लसमा राख्दै जाने छु । यसले गर्दा यो पुस्तक कस्तो हो भन्ने बुझ्न आम पाठकहरुलाई सहज हुने छ । यस अघि मैले पन्छी जगत भन्ने नेपाली चराका बारेमा नेपालीलाई लक्षित गरेर पुस्तक लेखेको थिएँ जुन नेपाली चराका बारेमा नेपालीको एक्लो हातले लेखेको नेपालमै पहिलो पुस्तक हो । (तस्विर संयोजन बेल्जियम निवासी मित्र एस बी छन्त्यालले गरेका हुन्) ।